Xildhibaano ka tirsan Golaha Deegaanka Gabilay oo beeniyay inay dacwad u gudbiyeen maxkamada sare | Somaliland.Org
September 29, 2011	Gabiley(Somaliland.Org)-Xubno ka tirsan Golaha deegaanka ee magaalada Gabilay ayaa beeniyay war sheegayay in toban Xildhibaan oo ka tirsan Mudaneyaasha Golaha deegaanku ay dacwad ka dhan ah wasaarada daakhiliga u gudbiyeen Maxkamada sare, sida uu ku soo waramay Weriyahayaga Gabilay Caydaruus Axmed Maxamed.
Xildhibaanadu waxay beeniyeen War ku soo baxay Wargayska Haatuf soo baxay Salaasadii Cadadkii 2780, oo Xildhibaan lagu magacaabo Ibraahim Xasan Sangal Xog-waran ka siiyey Wargayskaasi Arrinta Dacwada ay u gudbinayaan Maxakamada. Taasi oo uu ku sheegay in Xildhibaano ka tirsan Golahooda Gabiley oo uu ka mid yahay ay Dacwad u gudbin doonaan Maxkamada sare, Dacwadaasi oo ka dhan ah Wasaarada Arrimaha Gudaha, nuxurkeedana uu ku sheegay Xayiraad Wasaaradu ku soo rogtay Fadhiyadii Golaha Deegaanka Gabiley.
Xildhibaan Maxamed Muxumed Nuur (Laanloobar) oo ugu horreyn Shirkaa Jaraa’id ka hadlay ayaa gaashaanka ku dhuftay jiritaanka Warkaasi, waxaanu sheegay in arrintaa aanay waxba ka ogayn. Isaga oo arrintaa ka hadlaya waxa uu yidhi “Waxa la yaab igu noqotay Warkan aan ku arkay Wargayska Haatuf ee sheegaya in Toban Xildhibaan oo aan ka mid ahay aanu dacwad u gudbinayno Maxkamada Sare, oo aanu ku dacwaynayno Wasaarada Arrimaha Gudaha. Warkaasi oo Wargaysku kaga Xog-waraystay Xildhibaan Sangal. Xildhibaankuna uu tiriyey Xildhibaanada ku wehelinaya dacwada. Aniga oo ah Xildhibaan Laanloobar waxaan cadaynayaa in aanay jirin meel aanu go’aan ku wada gaadhnay, meel aanu ku wada tashanay, iyo meel aanu iskula qaadanay in aanu Wasaarada dacwayno.”
Xildhibaanku waxa uu intaasi ku daray “Xildhibaanka warkaa baahiyey kali ayay ku tahay, lamana ogin, mana wacna in Xildhibaanada Golaha laga been abuuro, oo fikirkooda iyo aragtidooda la qaloociyo. Kumana haysano Saaxiibkayo fikirkiisa iyo dacwadiisa, xorna waxa uu u yahay in uu u dacwad tago Maxkamad ama Wasaarad tuu doono, xorna u yahay Ra’yigiisa.”
Xildhibaan Maxamuud Sheekh Xuseen Nuuriye oo ka tirsan Xubnaha Golaha Deegaanka Gabiley oo Isna halkaa ka hadlay ayaa sheegay in aan la joogin wakhti Kaambayno la galo balse ay haboon tahay in horumar uun laga shaqeeyo isaga oo arrintaa ka hadlaya waxa uu yidhi “Lama joogo wakhti olole iyo kaambayn la galo iyo is-eryad. Laakiin waxa la joogaa wakhtigii laga wada shaqayn lahaa horumar iyo wada shaqayn. Inanta(Maayarka) Meesha joogtaana wixii aanu hore u soo dooranay oo dhan way isku dhaantaa oo Muddadaa kooban ayaanu aragnay wax la qabanayo. cidna dacwad uguma maqnin Maxkamad aanu tagaynaana ma jirto, Wasaarad aanu dacweeya is leenahayna ma jirto. Mana garanayo meel uu Xildhibaanku arrintaa(dacwada) ka keenay. Lama ogi warna uma hayo.” Xildhibaan Ibraahim Aw Aadan Cabdalle (Fanax) oo halkaasi ka hadlay waxaanu yidhi“Adeer Warna uma hayo warkaa, meel Xildhibaanka aanu isku aragnay oo aanu go’aan ku wada gaadhnayna ma jirto.”
Previous PostXubnihii UCID ee Gobolka Sool Oo ku dhawaaqay Inay ka baxeen XisbigaNext PostFaysal Cali waraabe oo ka hadlay cilaaqaadkii ka dhaxeeyay Gaani Iyo fadeexadda ka haysata Kiiskii UFO	Blog